जिप दुर्घटनामा प्रशासकीय अधिकृतसहित चारको मृत्यु
प्युठानको स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ । बुधवार बिहान भएको जिप दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । नयाँ वर्षमा स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका १४ जना कर्मचारी.....
नयाँ वर्षको शुभकामना ! (गजल)
रोग, व्याधि र बिपत्ति अब त गए हुन्थ्यो ! अनि पो नयाँ बर्ष सधैँ तिम्रो जय हुन्थ्यो । स्वर्णिम् सपनाको निन्द्रामा मस्त निदाउँन पाए, न कुनै चिन्ता हुन्थ्यो न त कुनै भय हुन्थ्यो । आकाश जस्तै खुल्ला भईदिए जिन्दगीको रङ्गमंच, जिन्दगीमा कुनै एउटा उत्कृष्ट अभिनय हुन्थ्यो । यो संसार सधैं घुमेजस्तै भाग्य पनि घुम्दो.....
बाँकेमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिएसँगै बाँकेमा समेत त्यसको असर देखापर्न थालेको छ । भारतका बिभिन्न सहरबाट जनुनाह नाका हुँदै फर्किएका नेपालीहरुका कारण जिल्लामा कोरोनाको जोखिम बढेको छ । यसैबिच कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा फेरी एक जनाले ज्यान गुमाएका छन.....
लघुकथा : ‘आशीर्वाद’ !
बुढी बज्यैको छिमेकी सहरमा नाम चलेको डाक्टर थियो । उसको चर्चा सहरका कुना कुनासम्म फैलिएको थियो । धेरै समय क्लिनिकमा र केही समय अस्पतालमा बित्थ्यो । घरमा श्रीमती, छोरा-छोरी र आमा थिए । एक्ली बुढी आमा, बैंसले मैमत्त स्वास्नी र कल्कलाउँदा छोराछोरीलाई कहिले समय दिन सकेको थिएन । सबैका आ-आफ्नै गुनासा थिए । ऊ भने.....
नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारुले नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामोदर भण्डारीलाई पदभार हस्तान्तरण गरेका हुन । त्यसैगरी निवर्तमान सचिव तिलक गाँउलेले नवनिर्वाचित सचिव कमल डाँगीलाई माईन्युट हस्तान्तरण.....